भारत - सीबीआईले हाथरस केसमा चार्जशीट खोल्यो - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
भारत - सीबीआईले हाथरस केसमा चार्जशीट खोल्यो
डिसेम्बर 18, 2020 डिसेम्बर 18, 2020 बेनेडिक्ट कासिगारा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ग्लोबल विश्व, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B, समाचार लेख, पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, पाकिस्तान थोक र B2B
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले हाथरसमा एउटी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चार अभियुक्तहरू विरुद्ध अभियोग दायर गरेको छ,
सेप्टेम्बर २ On, दिल्लीको सफदरजung अस्पतालमा उपचारका क्रममा केटीको मृत्यु भयो।
मंगलबार, पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले नयाँ बलात्कार विरोधी कानूनमा हस्ताक्षर गरे।
समाचार एजेन्सी एएनआई र पीटीआईले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्ट अनुसार एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चारको विरुद्ध हाथरसको मुद्दामा आरोपपत्र लगाइएको छ। सन्दीप, लवकुश, रवि र रामु नामक चार जनालाई सामूहिक बलात्कार, हत्या, र एसटी, एससी अत्याचार ऐन लगायतका धारा अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भारतको प्रमुख अन्वेषण एजेन्सी हो। इन्टरपोलको सम्बन्धको लागि सीबीआई भारतको आधिकारिक रूपमा निर्दिष्ट एकल सम्पर्क हो।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) हाथरसका चार आरोपित बिरुद्द आरोपपत्र लगाएको छ, उत्तर प्रदेश, सामूहिक बलात्कार सहितको सेक्सनको साथ। को सीबीआई उनले भने कि चार अभियुक्तको पनि गुजरातको फोरेंसिक ल्याबमा छुट्टै परीक्षण गरिएको छ।
पत्रकार अरविन्द गुनसेकरले ट्वीट गरे कि सीबीआईले आरोपपत्रमा सामूहिक बलात्कार र हत्याका धारा सामिल गरेको थियो। उत्तर प्रदेशको विशेष अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको छ।
यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने केही महिना अघि दलित केटीसँग बलात्कारको घटना सामने आएको थियो। सेप्टेम्बर २ On, मा सफदरजung अस्पतालमा उपचारका क्रममा बालिकाको मृत्यु भयो दिल्ली.
सेप्टेम्बर of० को रात, पीडितलाई उनको घरको नजिकै गाडिदियो। सम्पूर्ण घटनाले देशभरि सार्वजनिक आक्रोश देखायो। उत्तर प्रदेश सरकारले यस मुद्दाको छानबिन गर्न यस अघि एसआईटी गठन गरेको थियो।
यद्यपि यस मुद्दाको राजनीति पनि तातो भएको थियो र यो मामला अत्यन्त विवादास्पद भयो। योगी सरकारले केन्द्रलाई सीबीआई जाँचको लागि सिफारिस गर्‍यो। उत्तर प्रदेशको हातरसमा बलात्कार र हत्याको मुद्दालाई लिएर देशभरि प्रदर्शन पनि भए। महिला सुरक्षाको मुद्दा फेरि एक नयाँ बहस द्वारा पैदा भयो।
यसभन्दा पहिले यूपी पुलिसले राज्यमा यौन र सांप्रदायिक हिंसा जगाउन र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथको बदनाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र रचेको आरोप लगाएको थियो। उत्तर प्रदेश पुलिसले हाथरसको मुद्दामा कथित अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको सम्बन्धमा राज्यभर कम्तिमा १ FIR एफआईआर दर्ता गरेको छ।
मुख्य एफआईआरमा करीव people०० जनालाई देशद्रोह, षडयन्त्र, राज्यमा शान्ति भrupt्ग गर्ने प्रयास र धार्मिक घृणा जगाउने आरोप लगाइएको थियो। एक व्यक्तिले भनेजस्तै:
“उत्तर प्रदेश पुलिसले हामी विरुद्ध झूटा आरोप लगाउँदैछ किनभने हामी गरीब छौं। उत्पीडन समाप्त भएको छैन। उनीहरूसँग प्रमाण हुनुपर्दछ। म कल रेकर्डि to सुन्न चाहन्छु। "
उत्तर प्रदेश उत्तर भारतको एक राज्य हो। लगभग 200 मिलियन बासिन्दाहरूको साथमा, यो भारतको सब भन्दा बढी जनसंख्या भएको राज्यको साथै विश्वको सबैभन्दा जनसंख्या भएको देश उपविभाग हो। यदि यो देश भएको भए, उत्तर प्रदेश विश्वको सातौं सबैभन्दा बढी जनसंख्या हुने थियो।
यो केस हाल अनुसन्धान र विशेष अदालतमा चलिरहेको छ।
पाकिस्तानले बलात्कारीलाई बाँच्न नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरे
अक्टोबर २०२० मा, एउटा नयाँ कानून लागू गरियो पाकिस्तान द्रुत परीक्षण र कडा सजाय प्रदान गर्ने उद्देश्यले बलात्कारका घटनाहरुलाई रोक्न।
गम्भीर सजाय अन्तर्गत बलात्कारमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई रासायनिक क्यास्ट्रेसनको प्रयोगबाट कमजोर बनाउन सकिन्छ। मंगलबार, पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले नयाँ बलात्कार विरोधी कानूनमा हस्ताक्षर गरे।
अध्यादेश अन्तर्गत यौन अपराधीहरुको राष्ट्रिय दर्ता तयार गरी पीडितको पहिचान गोप्य राखिनेछ। त्यहाँ केही अपराधीहरुलाई औषधि दिएर मादक पदार्थ बनाउने प्रावधान पनि छ।
लाहोर शहरबाहिर एक महिलाले सामूहिक बलात्कार गरेपछि यौन अपराध विरुद्धको वातावरण सिर्जना भएको तरिकालाई ध्यानमा राखी कानून बनाइएको छ।
सांप्रदायिक समाचार हाथरस भारत लाहौर पाकिस्तान उत्तर प्रदेश
बंगलादेश - मूर्ति तोडफोड पछि चार पक्राऊ
दक्षिण कोरियाले उत्तरमा बेलुनहरू प्रतिबन्धित गर्‍यो
टिकटोकमा मासूमपरीक्षण के हो?
तपाईंको मार्केटिंग क्यारियरमा मार्केटिंग स्वचालनको प्रभाव
Pinterest क्यान्डी थोक र B2B बजार
प्रेस्टन यूनाइटेड किंगडम थोक र B2B बजार
इस्तानबुलमा थोक र B2B बजार मूल्यहरू
भारत थोक र B2B बजार
शरीर क्रीम थोक र B2B बजार
हात साबुन थोक - B2B बजार
L स्वस्थ खाना तपाईको खाजा खाजाको समयमा बनाउने
अनुकूलित फोन केसहरू - प्रकारहरू र तपाईंको लागि सही छनौट कसरी गर्ने